राजधानीमा भेटियो मान्छेको मासु काटेर चढाउने मन्दिर — Imandarmedia.com
राजधानीमा भेटियो मान्छेको मासु काटेर चढाउने मन्दिर
म तपाईंहरूलाई त्यही ठाउँ लैजान्छु है त। मंगलबजार दरबार स्क्वायरबाट ग्वार्कोतर्फ बढ्दा लगभग पाँच सय मिटर दुरीमा सुन्धारा लूँ हिति आउँछ। त्यहाँ पुगेर कुनै दोकानदारलाई सोध्नुभयो भने सुबहाल जाने बाटो देखाइदिन्छन्। अहिलेलाई त तपाईं चिन्ता नगर्नू, म छु नि सँगसँगै।
नवमीको रात भक्तजनहरूले शरीरको मासु काटेर चढाउने ठाउँ यही हो। स्थानीयहरू यो संस्कारलाई ‘ला खायेगू’ भन्छन्। नेवार भाषामा ‘ला’ भनेको मासु, ‘खायेगू’ भनेको ताछ्नु। यो पूजा राति ७ बजेतिर सुरू हुन्छ।
दुई गुभाजू र छ जना आजु सुबहालकै सबभन्दा जेठा व्यक्तिले पूजाविधि सम्पन्न गर्छन्। पूजा व्यवस्थापन उमेरअनुसार छैठौं नम्बरका आजुबाट हुन्छ। बाँकी पाँच जना आजुले चर्या गीत गाउँछन्। उनीहरू डमडम डमरू बजाउँछन्। छनछन ताः छन्काउँछन्।
ओहो निकै दुख्छ होला हगि ? मैले तर्सिंदै सोधेँ। उनले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘चौटा–चौटा मासु चट्टचट्ट काट्ने कहाँ हो र! अलिकति छाला काटेर चढाउने हो।’ ‘रगत त आउला नि ! मेरो डर थामिएकै थिएन, ‘छिसिक्क काँडा बिझ्दा त कस्तो दुख्छ ! झन् सियोले घोचेर ब्लेडले काट्दा दुख्दैन होला र !
अलिअलि त दुख्छ नि। रगत पनि आउँछ। तर, तपाईंले सोचेजस्तो सहनै नसक्ने हुँदैन, उनले हलुका पारामा भने, ‘ब्लेडले काट्दा रगत आए पनि त्यो रगत आगोमा चढाउनु हुँदैन।’ उनले मलाई ढुक्क पार्न थपे, ‘अहिलेसम्म कसैलाई इन्फेक्सन भएको वा घाउ दुखेर औषधि नै खानुपरेको सुनेको छैन।
अनि एक ठाउँको मात्र चढाउने कि धेरै ठाउँको ?’ मैले सोधेँ। ‘कसैले एक ठाउँको चढाउँछन्, कोही–कोही नडराउनेहरूले एकैचोटि १०–१२ ठाउँकै चढाउँछन्।’ बाफरे ! कस्तो डर नलाग्ने हो क्या, आफ्नै जीउमा सियो रोप्न, आफ्नै जीउ ब्लेडले काट्न तपाईंहरूलाई डर लागेन!
किरणले भनेजस्तो छाला मात्र काटोस् या चौटा मासु नै झिकोस्, शरीरको अंग ताछ्न त मुटु दह्रै चाहिन्छ होला बाबै ! महांकाल मन्दिरमा शरीरको छाला काटेर चढाइँदै। तस्बिर सौजन्यस् किरण शाक्यमहांकाल मन्दिरमा शरीरको छाला काटेर चढाइँदै। तस्बिर सौजन्यस् किरण शाक्य
त्यसैले डराउनेहरू भागै लिँदैनन्, किरणले भने, ‘हरेकले हरेक वर्ष भाग लिनुपर्छ भन्ने छैन। इच्छा हुनेहरू बर्सेनि आउँछन्, नभए कसैलाई करकाप छैन। उनी आफैंले जम्मा चारचोटि भाग लिएका रहेछन्। अन्तिमचोटि गरेकै बाह्र–पन्ध्र वर्ष बितिसकेछ। यसमा सरिक हुन सुबहालकै स्थानीय वा शाक्य कुलको हुनुपर्ने बन्देज छैन। टोलबाहिरका मान्छे आउने क्रम बढेको उनले बताए।
पुरातत्वविद् साफल्य अमात्यले आफ्नो किताब ‘काठमाडौं नगरायण’ मा लेखेअनुसार, आगलागीले विशालनगर क्षेत्रको बसाइ छिन्नभिन्न भयो। त्यहाँका बासिन्दा उपत्यकाभरि छरिएर बसोबास गर्न थाले। धेरै मानिस तत्कालीन दक्षिण कोलिग्राम अहिले काठमाडौं कोर–सिटीको दक्षिणी भाग सरे भने कोही ललितपुर गएर बसे। तिनैमध्ये सुबहालका बासिन्दा पनि हुन् भन्ने भनाइ छ।
सुबहालका चैत्यमा केही लिच्छविकालीन अभिलेख फेला परेका छन्, जसले यहाँको बसोबास प्राचीन भएको पुष्टि गर्छ। किम्बदन्तीअनुसार, जब हाँडीगाउँमा आगो लाग्यो, त्यहाँको एउटा समूह सुरक्षित स्थान खोज्दै इमाडोल यो। उनीहरूले आफ्नो आराध्य चैत्य सँगै लगेका थिए। बसाइँ सर्दा एउटा चिलले बाटो देखाएको विश्वास गरिन्छ।
समूहका एक वयोवृद्धले सपनामा आकाशवाणी सुनेछन्– तिमीहरूले पूजा गर्ने चैत्यबाट भोलि एउटा चिल उड्नेछ। त्यो चिल जुन ठाउँ पुगेर अडिन्छ, तिमीहरू त्यही ठाउँ आफ्नो गाउँ बसाउनू, किरणले सुबहालको कथा सुनाए।
‘कस्तो प्रस्ताव ?’ महांकालले सोधे। ‘प्रभु, या त हामी अन्तिम पुत्र बाँकी छउञ्जेल बलि चढाएर यो प्रथा सदाको निम्ति अन्त्य गर्छौं, या हरेक वर्ष एक जना पुत्रको सट्टा धेरै मान्छेको शरीरबाट थोरै थोरै मासु चढाउँछौं ? उनीहरूले हात जोडेर बिन्ती गरे, ‘दोस्रो विकल्प मान्नुभयो भने हाम्रो कुल रहेसम्म यो प्रथा जारी रहनेछ। हजुरले कुनै वर्ष भोकै बस्नुपर्ने छैन।
सुबहालका बासिन्दाको प्रस्ताव महांकाललाई चित्त बुझ्यो। उनी दोस्रो विकल्पमा राजी भए। यसको बदलामा यो प्रथा रहेसम्म सुबहालको रक्षा गरिरहने बाचा पनि गरे। ‘त्यही भएर आज पनि हामी आफ्नो शरीरको थोरै मासु काटेर महांकाललाई चढाउँछौं,’ मेरा गाइड किरण शाक्यले भने, ‘यसको सट्टा महांकालले हाम्रो टोल र हामी सबैको रक्षा गरिरहेका छन् भन्ने विश्वास छ।
किम्बदन्ती भनेको कथ्य र तथ्यको मिश्रण हो। यहाँ चिलले बाटो देखाएको र महांकालले मान्छे मारेर खाएको भनाइलाई कथ्य मान्न सकिन्छ। त्यसो त समुदायको सुरक्षानिम्ति व्यक्ति विशेषको ज्यान अर्पण गर्ने चलन प्राचीन इतिहासहरूमा नभएको होइन। यसलाई नै नरबलि का रूपमा लिने गरिन्छ। यहाँ त्यस्तै नरबलिको प्रथा थियो होला भनेर मान्न पनि सकिन्छ।
अहिले सबै जग्गा मासिएर चैत्य मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यो हाम्रा पुर्खाको धरोहर हो।’ इमाडोलको चैत्य, जुन सुबहालका बासिन्दाको आराध्य हो। उनले किम्बदन्तीसँग मेल खाने अर्को तथ्य पनि सुनाए। सुबहालका बासिन्दाले पुत्रहरूको बलि चढाउँदा–चढाउँदा परिवारमा पुरूषहरू घट्दै गएको हामीले किम्बदन्तीबाट थाहा पायौं। आज पनि जय मनोहर महाविहारसँग जोडिएको समुदायमा पुरूष संख्या थोरै छ।
अहिले हामी जम्मा ६३ पुरूष छौं। परिवार संख्या त करिब २० मात्र छ। यो अन्य विहारको दाँजोमा निकै सानो हो,’ किरणले भने, ‘पच्चीस वर्षअघिसम्म त हामी ३० जना भन्दा धेरै थिएनौं।’ उनले त्यति बेला आफ्नो कौतूहल मेट्न बूढापाकालाई सोधेका रहेछन्, ‘हाम्रो समुदाय किन यति सानो ?
तपाईं पनि गरेर हेर्नुस् न ! ‘बाफरे ! मजस्तो डरछेरुवाले कहाँ पाएर सक्नु ! बरू तपाईंकी छोरीले के भनिन् ? उनलाई कति दुख्यो रे ? मैले गत वर्ष पूजामा सरिक किरणकी २० वर्षे छोरीका बारेमा सोधेँ।
निकै कम ? ‘कति कम ? मैले अझै खिपेँ। उसले अस्ति पिसिआर टेस्ट गरेकी थिई। नाकमा सुइरो घुसाउँदा दिनभरि दुखिरह्यो भन्दै थिई, त्यो दुखाईभन्दा कम। उनले अझै प्रस्ट पार्दै भने, इन्जेक्सन लगाउँदा जति दुख्छ, त्योभन्दा पनि कम।